Waxaa hubaal in aad maqashay ee soo afjarno qalab Samsung iyo faa'iidooyinka sidaas samaynaya. Haddii aad ku fekereyso in aad soo afjarno Samsung, waxaa jira sababo la hubo sababta ay tahay in aad u samayn. Faa'iidooyinka soo afjarno aad Samsung tiro badan yihiin oo ku siin doona qalab ah oo si fiican u shaqaynayaan iyo waddaa wax ku ool ah. Halkan waxaa ku qoran dhowr faa'iidooyinka soo afjarno qalab Samsung.
A rujin phone Samsung noqon doonaa nuglaadaan socda codsiyada gaarka ah. Kuwani codsiyada gaarka ah u bixiyaan qaababka kale oo muhiim ah marka loo eego codsiyada joogto ah.
A qalab Samsung rujin kuu ogolaanayaa inaad si loo soo dajiyo iyo isticmaali ROMS caadadii ku yaal. ROMS Custom soo faa'iidada daray ee la rajeenayo in qaab iyo faaidaysan in la hubiyo qalab aad waxaa socda si hufan.
Qalab A rujin sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si loo soo dajiyo kabashada Custom-qabadka fiican
Qaab kale oo caarurta qalab rujin waa awooda in aad ku darto Mods iyo kernels
Haddii aad qabto xasuusta gudaha u hooseeya aad codsiga wax ka xasuusta gudaha aad telefoonka ee ku wareejin kartaa in aad kaarka SD ka dib soo afjarno.
Ma rabtaa in aad dib ilaa Data ka hor soo afjarno?
Waxaa lagu talinayaa in ay gurmad ah oo dhan aad xogta ku saabsan qalabka Samsung ka hor soo afjarno. Sidaas waxaad yeelan doontaa nuqul ugu dambeeyay ee wax walba waa in wax qaldamaan. Mid ka mid ah codsiyada ugu waxtarka badan si lagaaga caawiyo in aad hesho oo aad gurmad si fudud waa MobileGo Wondershare . Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo oolaha. Halkan sida loo isticmaalo Wondershare MobileGo in gurmad qalab Samsung.
Talaabada 1: maleeyo in aad soo bixi oo lagu rakibay Wondershare MobileGo si aad u computer, ordo codsiga iyo xirmaan telefoonka Samsung in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB. Software waa in ay aqoonsadaan telefoonka.
Talaabada 2: Riix "Mid ka mid ah kaabta Click" sida image kor ku xusan ayaa muujinaya. A suuqa kala gurmad yar muuqan doonaa. By default dhammaan waxyaabaha ku saabsan suuqa kala waxaa la qorayaa, aad si fudud u uncheck karaan kuwa aad doonayso in aan xoojiyaa. Markaas waa in aad doorato meesha faylasha gurmad sababtay. The C Jid: \_ Users \_ Amninidtrator \_ Documents My \_ Wondershare \_ MobileGO \_ kaabta caga caadiga ah. Waxaad dooran kartaa waddo cusub adigoo gujinaya caleenta.
Talaabada 3: Riix Back ilaa bilowdo hawsha. Hubi in qalab aad xiran yahay si aad u computer marayo nidaamka oo dhan.
Sida loo rujin aad Samsung in mid ka mid click
Hadda oo aan gurmad ah aan hadda si nabad ah rujin kartaa telefoonka Samsung. Si aad u sameeyo mid ka mid kaliya click aanu mar kale u socdaa in ay ka faa'iideystaan ​​Wondershare Mobile Tag.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah xal-u-ka rujin qalab Samsung laakiinse ma jiro sidii si degdeg ah oo waxtar leh ee ugu MobileGo Wondershare. Halkan waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo rujin aad Samsung in mid ka mid click isticmaalaya Wondershare MobileGo.
Talaabada 1: Orod Wondershare MobileGo iyo xiriiriyaan qalab Samsung in computer isticmaalaya fiilooyinka USB. Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa qalab aad isticmaalaya Wi-Fi. Software waa in ay aqoonsadaan qalab aad.
Talaabada 2aad: In daaqadan aasaasiga ah, dooro "Mid ka mid ah Root Click." Barnaamijkan waa inuu ku bilaabmaa habka rooting isla markiiba. Fadlan dulqaad waxay qaadan kartaa waqti ka mid ah iyo in la hubiyo in aad telefoonka xiran yahay si aad u computer marayo nidaamka oo dhan.
Waa in ay fududahay in la rujin qalab Samsung in waqti aad u yar. Iyadoo MobileGo Wondershare habka loo sameeyo si aadan in aad wax bartaan ama waqti isku dayayaan in ay ku ogaado software aad u.
> Resource > Android > Sida loo xidid Samsung ee One Click